Iindaba zeAppStore-Crash Bandicoot Nitro Kart 2 | IPhone iindaba
Iindaba zeAppStore-Crash Bandicoot Nitro Kart 2
Phantse kwiminyaka emibini kamva Ukujula Ingozi yeBandicoot Nitro Kart 3D, Inkampani ye-Activision igqibe kwelokuba inike ithuba kwakhona kwesinye sezihloko ezaphule iirekhodi zokukhuphela kwi-AppStore. Ngokumiliselwa kweCrash Bandicoot Nitro Kart 2, iActivision iyabheja kakhulu kwimidlalo yokubaleka kaMario Kart, enike iziphumo ezilungileyo kwiqonga leselula le-iPhone / iPod Touch.
Kule nxalenye yesibini, akukho zininzi izinto ezintsha. Umdlalo-ofumaneka ngexabiso le- € 7,99 - iqulethe itotali Iisekethe ezili-12, apho sinokukhuphisana khona ukuya kwi-4 abadlali kwi-intanethi.
Ukuba ulithandile icandelo lokuqala, esi sitolimende sesibini esineempawu ezintsha kunye neesekethe ziya kukushiya ungcamle kakuhle emlonyeni wakho.
Ikhonkco AppStore | Ingozi yeBandicoot Nitro Kart 2
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Iindaba zeAppStore-Crash Bandicoot Nitro Kart 2
Lo mdlalo mkhulu, unako ukuwuphendula lo mbuzo? ukudlala online Ndiyabona ukuba bamfumana njenge nitro bayenza njani? kwaye iphunyezwa njani imishini 1?
Ubuqhetseba: Ngaphezulu kwe-iPhone yakho ye-3G okanye i-3GS
Isplaya seSelfowuni ye-iPhone